Jeôgrafia Info. About. What's This?
I Melanezia dia iray amin ireo vondro-nosy telo lehibe ao amin ny Ôseana Pasifika, izay mamorona an i Ôseania. Ity famondronana ara-jeôgrafia ity dia toherin ny mpahay jeôgrafia sasany, nefa ampiasaina matetika izany sy ireo firenena voakasika. Ny anarana hoe Melanezia dia avy amin ny teny grika hoe μέλας / mélas, "mainty, sy ny hoe νῆσος / nễsos, "nosy", ka midika hoe "nosy mainty".
Ny morontsiraka dia tany mifanila amin ny faritry ny ranomasina na faritry ny ranomasimbe, ny moron-dranomasina ny mampifandray ny morontsiraka sy ny tany iray. Ny famerana ny sakan ny morontsiraka iray mankany anaty tany dia miankina amin ny lalàm-panjakana mifehy azy na amin ny fahefana ara-tsiansa, noho ny antony ara-pôlitika na ara-piarahamonina na ara-toekarena.
Ny Tendrontany Avaratra dia toerana ara-jeôgrafia any avaratra indrindra eto an-tany, any ampovoan ny renomasimbe Arktika manana halalina 4 261 m. Misy ranomandry foana eo aminy. Ny tendrontany avaratra dia tsy teboka iray tsy mihetsika, fa somary mivilavila tahaka ny tandrimo, ny tsingerim-potoana fihodinkodinany dia14 volana. Samihafa amin ny tendrontany araka anjan andriamby ny tendrontany ara-jeôgrafia, ny tendrontany araka anjan andriamby dia ivon-toerana itodihan ny tondroavaratra. Ny fizahana ny tendrontany avaratra dia nanomboka tamin ny 1908 tamin i Frederick Cook tonga tany tamin ...
I Eorôpa Avaratra Andrefana dia ny ilany avaratra sy andrefani Eorôpa izay tsy manana famaritana mazava sy raikitra. Araka ny famaritana ara-jeôgrafia, i Eorôpa Avaratra Andrefana dia mahafaoka ani Irlandy, ny Fanjakana Mitambatra, i Belzika, i Nederlandy, i Alemaina Avaratra, i Loksemborga, ny tapany avaratra amini Frantsa, i Danemarka, i Nôrvezy, i Soeda ary i Islandy. I Finlandy sy i Alemaina Atsimo ary i Soisa dia matetika ampidirina ao amini Eorôpa Avaratra Andrefana, toraka izany koa i Aotrisy, na dia tsy matetika aza. Ny tapany atsimoni Frantsa kosa dia matetika tafiditra ao aminny ...
Ny lembalemba dia endiky ny vohon ny tany izay manana haambo avo lokoa raha mitaha amin ny faritra manodidinba azy sady midadasika nefa tsy dia mikintoana loatra tsy tahaka ny tendrombohitra. Iray amin ireo endrika telo lehiben ny vohon ny tany ny lembalemba, ka ny roa hafa, dia ny tany lemaka sy ny tendrombohitra. Faritra ara-jeôgrafia ahitana renirano mikoriana any ambany lalina ny lembalemba, tsy tahaka ny tany lemaka izay ikorianan-rano saika mitovy haavo amin ny tany. Tsy dia mikintoana loatra ny vohon ny tany anelanelan-drenirano ao amin ny lembalemba, ka izay no iavahany amin ny ten ...
Ny fiteny finô-ogriana dia fianakaviam-piteny tenenin ny olona ao Eorôpa, dia ny vahoaka finô-ogriana, ao amin ny faritra ara-jeôgrafia midadasika dia midadasika avy any amin ny Ranomasina Baltika sy avy any amin ny tapany avarar i Skandinavia hatrany Oural sy any Don. Ny isan ny mpiteny finô-ogriana dia 25 000 any ho any. Ny fiteny finô-ogriana sasany dia nanjavona tsy misy mpiteny intsony tamin ny taonjato faha-20 ary maro amin ireo fiteny ireo no tandindomim-pahafatesana. Iray amin ny sampana lehiben ny fianakaviam-piteny oraliana ireo fiteny finô-ogriana, ka ny sampana faharoa dia ireo ...
Ny Kristianisma tandrefana dia ny fitambaran ny Fiangonana katôlika sy ireo Fiangonana Prôtestanta ao amin ny tapany andrefan ny Kôntinentan i Eorôpa sy ny Kôntinentan i Amerika ary i Afrika ka hatrany Aostralia. Nanomboka tamin ny nielezan ny fivavahana kristiana taorian ny taonjato faha-16 taty Afrika sy tany Ôseania dia tsy tena voafaritra ara-jeôgrafia ny hoe "Kristianisma tandrefana" fa ara-pirehan-kevitra na ara-teôlôjia sy araka ny fiavian ny sampan ny kristianisma arahin ny fiangonana resahina. Isan ny tsy mampitovy ny fiheveran ny Kristiana tatsinanana sy tandrefana ny amin ny fah ...
Ny Sefoy dia vahoaka afrikana, isan ny vahoaka akàna. Ity zana-bondron ny Akàna ity no zana-bondrona lehibe ao amin ny faritra avaratra-andrefana ao Ganà, izay miteny amin ny endri-pitenim-paritry ny fiteny akàna, dia ny fiteny sefoy. Ara-jeôgrafia, ny tany onenan ny Sefoy dia ao amin ny farira avaratra-andrefana, 200 km miala ny morontsiraka ary monina amin ny velaran-tany mirefy 2 695 maily toradroa, vakivakin ny renirano Tano sy Bia. Nipoitra avy any amin ny tapany avaratr i Afrika tahaka ny foko ankàna hafa rehetra ny Sefoy, izay nandositra ny ady. Miisa 572 020 ny Sefoy tamin ny taona ...
I Elama dia faritra tamin ny Andro Taloha tao amin ny tapany atsimo andrefan ny Lembalemba Iraniana, manodidina ny faritanin i Khouzistan sy ny faritanin i Fars, izay mifanandrify amin ny faritr i Sosa sy Ansàna. Elamita no fiantsoana ny mponina ao. Miresaka momba ny tanin ny Elamita ireo lahatsoratra tamin ny faran ny taonarivo faha-4 hatramin ny taonarivo voalohany tal. J.K. ka mahafaoka zava-misy ara-jeôgrafia sy ara-politika samihafa nandritra ny tantara lavany. Nisy fianakavia-mpanjaka maro nifandimby nitondra tao nefa nisy fotoana nisian ny fianakaviana niara-nitondra ary nisy koa fo ...
Ny fiteny altaika dia fianakaviam-piteny tenenina ao Eorazia, hatrany Torkia sy Môldavia ka hatrany Azia Atsinanana, mandalo an i Azia Afovoany, an i Siberia ary any amin ny faritra farany atsinanana ao Rosia. Isan io fianakaviam-piteny io ireo fiteny torkika sy ireo fiteny tongoza, ary koa ny fiteny kôreana sy ireo fiteny japônika. Avy amin ny anarana hoe Altay izay anaran ny tandavan-tendrombohitra ao Azia Afovoany, izay mitsinjara amin i Sina sy i Kazakstàna sy i Môngôlia ary i Rosia, ny hoe altaika. Mifanaraka ny mpahay teny amin ny fisian ny teoetra iombonan ireo fiteny ao amin ity fi ...
Ny raki-pahalalana dia boky firaketana ny fampahalalana mikasika ny fahaizanny olombelona. Ny raki-pahalalana ankehitriny dia na vita taratasy na eo aminny Aterineto izay mirakitra lahatsoratra maro aminny taranja iray ho anireo raki-pahalalana manokana, na aminny taranja rehetra ho anireo raki-pahalanana tsotra. Roa arivo taona izay no nisianny rakipahalalana voalohany; ny rakipahalalana voalohany, Tantara Voajanahary "Histoire Naturelle" aminny teny frantsay, dia nosoratani Pliniosy Be Taona taminny taona 77 tany ho any. Ny raki-pahalalana araka ny amantaratsika azy aminizao fotoana izao ...
Ny fiteny papoa dia vondrom-piteny ao aminny tapany anrefanny Oseana Pasifika sady tsy fiteny aostroneziana no tsy fiteny aostraliana. Tsy mpihavana ny fiteny ao aminio vondrona io ka tsy mamorona fianakaviam-piteny. Ny faritra misy olona miteny aminny fiteny papoa dia ny ao Ginea Vaovao sy ny nosy manakaiky azy ary ny ampahany sasany amini Indonezia atsinanana. Ny fanasokajiana ny vahoava papoa, izay avahana aminny Melaneziana, dia naroso ka notondroini Sidney Herbert Ray toy izany taminny taona 1892.
Ny Madianita na Midianita, araka ny Bokin ny Genesisy, dia taranak i Midiana izay zanaka lahin i Abrahama tamin ny vadiny Ketora na Setorà. Atao hoe Madiana na Midiana ny faritra onenan izy ireo, izay toerana ara-jeôgrafia resahina ao amin ny Baiboly sy ny Korany. Milaza i William G. Dever fa ny Midiana resahina ao amin ny Baiboly dia ao avaratra-andrefan ny Saikanosin i Arabia, ao amin ny torapasika atsinanan ny Helodranon i Aqaba ao amin ny Ranomasina Mena, izay faritra izay lazainy fa tsy nonen olona maro talohan ny taonjato faha-8 sy faha-7 tal. J.K. Izao ny voasoratra ao amin ny Baibo ...
Ny tendrombohitra dia endrika ara-soridrefitany hita amin ny vohontany miabo, hita ambon ny planety telorika Tany, Volana.
2. Ony sy renirano
Ony sy renirano eto Madagasikara
Farihy eto Madagasikara
2.1. Ony sy renirano Renirano
Ny renirano dia lakandrano natoraly nohadianny ranomamy. Ny toerana ipoiranny renirano dia atao hoe loharano ary ny toerana anariany ny ranony dia atao hoe vavarano. Ny vavarano dia mety ranomasina na farihy
2.2. Ony sy renirano Farihy
Ny farihy dia velarandrano misy eny anivonny kontinenta, ary matetika avy amina velarandranomandry. Ny ranonny farihy dia avy aminny renirano sy/na avy aminny fiakaranny rano avy ambaninny tany. Ny farihy ngeza indrindra dia lavaka nitranga avy aminny tany tresaka fay fa ny farihy sasany dia avy aminny fanentsemana ny lohasaha, na avy aminny daraboka. Ny farihy koa dia mety miforona ao anatinny lohasaha ao aorianny fananganana tohadrano. Ny farihy ambony toerana indrindra eto an-tany dia farihy iray eo aminny tendrombohitra Nevado Ojos des Salado. 6 345 m ny haambo misy ilay farihy eo aminny sisintan i Arjentina sy i Silia
2.3. Ony sy renirano Farihy eto Madagasikara
3. Nosy sy saikanosy
Ny saikanosy dia tany saika hodidinin-dranomasina nefa misy tapany mampitambatra azy aminny tany lehibe, nefa ny nosy dia voahodidina rano avokoa ny sisiny.
Nosy eto Madagasikara
3.1. Nosy sy saikanosy Nosy
3.2. Nosy sy saikanosy Saikanosy
3.3. Nosy sy saikanosy Nosy eto Madagasikara
4. Ranomasina sy ranomasimbe
Ny ranomasina dia velaran-drano midadasika, manodidina kontinenta aminny ankapobeny, ary mahasarona faritra lehibe dia lehibe aminny velaranny tany manontolo.
Ny ranomasimbe dia velarandrano masina masira lehibe dia lehibe sady lalina dia lalina tokony ho 4000 m, eo anelanelanny kontinenta roa na maromaro. Ny telo ampahefanny velaranny tany dia rakotra ranomasimbe avokoa.
Ny helodrano dia velaran-drano farihy na ranomasina mandroso anaty tany.
amin ny endri - pitenim - paritry ny fiteny akàna, dia ny fiteny sefoy. Ara - jeôgrafia ny tany onenan ny Sefoy dia ao amin ny farira avaratra - andrefana, 200
heverina fa ihodinan ny tany. Ny tendrontany avaratra dia toerana ara - jeôgrafia any avaratra indrindra eto an - tany, any ampovoan ny ranomasimbe Arktika
dia sokajiana ao amin i Amerika Afovoany aza i Meksika ao amin ny bokin - jeôgrafia somary efa taloha. Ny Ranomasimbe Pasifika dia any andrefana, ny Ranomasimbe
solitany I Magreba, mandritry ny arivo taona mahery dia vondrona ara - jeôgrafia fa tsy ara - piteny betsaka ny fiteny ao: ny fiteny arabo sy ny fiteny
hatramin ny taonarivo voalohany tal. J.K. ka mahafaoka zava - misy ara - jeôgrafia sy ara - politika samihafa nandritra ny tantara lavany. Nisy fianakavia - mpanjaka
fifampidramana toetra: ny fiteny altaika dia mety vondrom - piteny ara - jeôgrafia tany aloha. Mitohy izany tsy fitovoan - kevitry ny mpahay teny izany hatramin
New York dia tanàna any Etazonia, ny anarany ofisialy amin ny teny anglisy dia New York City mba tsy hifangaro amin ny faritany mizakatena ny New York
I Indônezia, na Repoblikan i Indônezia amin ny fiteny indônezianina Republik Indonesia dia firenena eo anelanelan i Azia Atsimo Asinanana sy i Ôseania
18 54 49 S 47 32 10 E 18.913680 S 47.536130 E - 18.913680 47.536130 Antananarivo dia renivohitra ara - pôlitika sy ara - toekarenan i Madagasikara